10 နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips
10 နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips
ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
Florence နေဖို့တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ရာအရပျဖြစ်ပါတယ်လုပ်ဖို့တန်ချိန်ရှိပါတယ်. ဒါပေမဲ့, သင်ဤမြို့တော်ကျော်လွန်စွမှရှာဖွေနေလျှင်, အကြှနျုပျတို့သညျဖုံးအုပျတယ်ပါပြီ. ရုံဖြစ်ကြောင်းခရီးစဉ်ကိုမှအချို့သောအံ့သြဖွယ်သောနေရာများရှိပါသည် ရထားစီးနင်း ကွာ Florence ကနေ. ဒီမှာပါ 10 သငျသညျကိုခံစားရန်အဘို့အနေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips!
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးသည်အများစုကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ Way ကိုရန်ခရီးသွားနှင့်ကြိမ်မြောက်ဆောင်းပါးရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူရေးသားခဲ့သည်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည် တစ်ဦးကရထား Save, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
1. နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips: Pisa
Pisa ၎င်း၏ကျော်ကြားကြောင့်အများဆုံးခရီးသွားရဲ့ပုံးစာရင်းတွင်ဖြစ်ပါတယ် ပိန်မျှော်စင်, Santa Maria Assunta ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, နှင့်အခြားထူးခြားသောက်ဘ်ဆိုက်များ. ဒါပေမယ့်မြို့သူ့ဟာသူ, ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် ARNO မြစ် ချ. ဝေဖန်, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တန်ဖိုးရှိတစ်ရက်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်! ကောင်းတဲ့အရေအတွက်ရှိတယ် အသေးစားပြတိုက် အထဲကစစ်ဆေး, လည်းပဲ ဥယျာဉ်. အဆိုပါ Palazzo Blu လညျးအရေးကွီးခေတ်သစ်အနုပညာရှင်များ monographic ပြပွဲရရှိထားသူ (Chagall, Miro, နှင့်မကြာသေးမီက Toulouse Lautrec). အစဉ်အမြဲ Keith ယုန်ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုနောက်ဆုံးအနံရံထွက်ရှာဖွေရေးပြုပါ, ကိုခေါ် Tuttomondo.
သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ. ဒါကြောင့်, သငျသညျပိန်ကြုံသောမျှော်စင်တက်ပြီးအထွဋ်၏ claustrophobic သို့မဟုတ်ကြောက်လန့်လျှင်သင့်အားဆွဲဆောင်အသံမအံ့သောငှါသတိရ, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေမြင်နေရကျိုးနပ်သည်!
Pisa ရထားမှ Livorno
Pisa ရထားမှ Lucca
Pisa ရထားမှ Arezzo
လူကြိုက်အများဆုံးနေ့တစ်ခုမှာမီးရထားဖြင့် Florence မှစ. Trips Siena ရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့ Palio ကျော်ကြားသည်, အဆိုပါအညီအမျှကျော်ကြား Piazza del Campos မှတဆင့်ပြေးတဲ့မြင်းပြိုင်ပွဲရာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစက၎င်း၏လှပသောအဘို့အလူသိများသည် အလယ်ခေတ်ဗိသုကာ အခြားအမှုအရာတို့ကိုကြား. Siena တစ်ခုဖြစ်သည် ရှေးဟောင်းမြို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေကို ခံရ. က်ဘ်ဆိုက်များ နှင့်တစ်ဦးအလည်အပတ်ရကျိုးနပ်သည်!
မီလန် Siena မှရထား
Florence Siena မှရထား
Siena ရထားမှ Perugia
3. နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips: Livorno
ဤသည်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်မြို့နှစ်ဦးစလုံးအလိုရှိကြသည်တွင်သောသူတို့အဘို့ကို Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. အများဆုံးစုံလင်သောနေ့ခရီးများထွက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. တခြားကဲ့သို့သမိုင်းဝင်သို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး Tuscan မြို့ကြီးများ. သို့သျောလညျး, ကအီတလီနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာပင်လယ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းမြို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အနားယူရန်အကောင်းဆုံးနေရာ နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာစူးစမ်း, လူတိုင်းအတွက်အရာတစ်ခုခုနှင့်အတူ.
Livorno ရထားမှ Arezzo
Livorno ရထားမှ Pisa
Florence Livorno မှရထား
Livorno ရထားမှ Siena
4. စန်း Gimignano
Florence နှင့် Siena အကြားတည်ရှိပြီး, စန်း Gimignano Tuscany အတွက်အများဆုံးပါရွာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဝါကြွား 14 အလယ်ခေတ်တာဝါတိုင်, cobblestone လမ်းများတဝိုက်လှည့်လည်ခြင်းနှင့်အဆောက်အဦး၏အဟောင်းအလယ်ခေတ်ဗိသုကာအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ဖို့. ဒါဟာကိုယ့်တစ်နာရီကွာ Florence နေ.
ဖလောစန်း Gimignano မှရထား
စန်း Gimignano ရထားမှ Arezzo
စန်း Gimignano ရထားမှ Pisa
Lucca စန်း Gimignano မှရထား
5. နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips: Bologna
Tuscany နှင့်တစ်နည်းနည်းပိုပြီးစျေးကိုအဆမတန်မြှလက်လှမ်းမမီဖို့ပြင်ပပေမယ့် (သင်ကအရမ်းနှေးကွေးနေဒေသဆိုင်ရာရထားယူချင်မဟုတ်လျှင်), အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းမီးရထားရုံတစ်ဝက်ကျော်တစ်နာရီအတွင်း Bologna ရန်သင့်အားကြာ. (ကနေသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေရဖို့သေချာပါစေ တစ်ဦးကရထား Save ဒါပေါ့!) Bologna အီတလီမှာအများဆုံး underrated မြို့ကြီးများ၏တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပေါ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဟော့စပေါ့ဖြစ်ပါတယ် 10 နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips. ယင်း၏လှပသောသမိုင်းဝင်စင်တာနေသော်လည်း, ကြွယ်ဝသောအစားအစာယဉ်ကျေးမှု, နှင့်သွက်သေးစိတ်အေးလက်အေးလေထု, ဒါကြောင့်မကြာခဏပုံမှန်ဗင်းနစ်ကို Florence ရောမမြို့လမ်းကြောင်းအပေါ်ခရီးသွားဧည့်သဖြင့်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်.
ပျော်စရာအစားအစာခရီးစဉ်မှအလယ်ခေတ်တာဝါတိုင်တက်ပြီးထံမှ Bologna အတွက်လုပ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာရှိပါတယ်အဖြစ်ဒါကအရှက်ကွဲ, ထိုသို့ရှာဖွေစူးစမ်းအဘို့ကြီးစွာသောအခြေစိုက်စခန်းစေသည် သည်အခြားဆွဲဆောင်မှု ဒေသတွင်း၌. ကျနော်တို့ဧပြီလအဲဒီမှာတစ်ပါတ်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ကြော့ရှင်းနှင့် gritty ၏ရောနှောချစ်ပြီး, ဒါပေါ့, အားလုံးကြောင်းအရသာလတ်ဆတ်တဲ့ခေါက်ဆွဲ.
ဗင်းနစ် Bologna မှရထား
Florence Bologna မှရထား
မီလန် Bologna မှရထား
အဆိုပါ Chianti ဒေသတွင်း၌တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့မြို့, Greve သမိုင်းတွေအများကြီးနှင့်အတူတစ်ဦးက hidden ကျောက်မျက်ဖြစ်ပါသည်, ထုံးတမ်းစဉ်လာများ, နှင့် စပျစ်ရည်ကိုများများ ယဉျကြေးမှု. Greve ယင်း၏မှုပညာရှငျနှငျ့စျေးဆိုင်စူးစမ်းခြင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ဖို့ကို Florence ကနေပြီးပြည့်စုံသောနေ့ကခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, ကဖေး, နှင့် ကော်ဖီဆိုင်များ. သင်တစ်ဦးစိတ်အေးလက်အေးနေ့အဘို့ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, Greve သင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောရှေးခယျြမှုဖြစ်နိုင်သည်.
7. နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips: Saturnia
Saturnia မြောက်ပိုင်းဗဟိုအီတလီနိုင်ငံ Tuscany အတွက် spa မြို့ဖြစ်ပါသည်. အပန်းဖြေခြင်းနှင့် unwind ရန်ပြီးပြည့်စုံသောလိုရာခရီး. အဆိုပါအပူ ရေပူစမ်း Saturnia တွင်ချိုင့်ဝှမ်းအလယ်၌ရှိသောဆာလဖာစမ်းရေများဖြစ်ပြီးသူတို့၏ကုထုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်လူသိများကြသည်, ခပ်သိမ်းသောနေ့၌နှစ်မြှုပ်ခြင်းအားဖြင့်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်သုခချမ်းသာကိုပေးစွမ်းသည်.
ယိုကို Grosseto ရထား
Perugia အ Grosseto ရထား
Viterbo အ Grosseto ရထား
ရောမမြို့မှ Grosseto ရထား
တောင်ကုန်း tufa ၏ဖန်ဆင်းတဲ့မတ်စောက်သောထိပ်ပေါ်တွင် Etruscan တည်ထောင်ထားတဲ့ပြီးတာနဲ့ (မီးတောင်ပြာမှုန်သောကျောက်). Orvieto ၏မြို့သိသိသာသာ Tufa ဟုခေါ်တွင်တူညီသောကျောက် built ခုခံကာကွယ်နံရံများအားဖြင့်ပြီးစီးသော tuff ကမ်းပါးအထက်မြင့်တက်. မမွငျမသှားနိုငျသောအဓိကဆွဲဆောင်မှုကတော့ Duomo နှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းနေအိမ်သို့များမှာ. ဤသည် quaint မြို့ပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်နှင့်၎င်း၏ဗိသုကာတွေရဲ့ရန်အဘို့အပြီးပြည့်စုံ.
Florence Orvieto မှရထား
Orvieto ရထားမှ Siena
Orvieto ရထားမှ Arezzo
Orvieto ရထားမှ Perugia
9. နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips: Arezzo
သငျသညျကို Florence မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင် Renaissance အနုပညာချစ်သောကြောင့်,, Arezzo တက် hit, တစ်နာရီသို့မဟုတ်ဒီတော့ကွာရထားပေါ်တွင်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားများအတွက် ရှုထောင့်. Francesc Piero, အဘယ်သူ၏ Urbino ၏ Duke နဲ့ Duchess ၏ပုံတူကိုသင် Uffizi ထဲမှာမွငျနိုငျ, စန်း Francesco ၏ဤမြို့ကိုအသင်းတော်၌အမြင့်ဆုံးသော Chapel ခြယ်. အဆိုပါရှုပ်ထွေးနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများသံသရာ, စစ်မှန်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံပြင်ကိုကိုယ်စားပြု, အစောပိုင်း Quattrocento ၏သြဇာအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်, အနုပညာရှင်အာကာသသူ၏အရူးစိတ်ကူးများထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သော (တဦးတည်း-point ရှုထောင့်အပေါ်အခြေခံပြီး), ကြက်ဥပုံသဏ္ဌာန်ခေါင်းနှင့်အတူ se နြေ္ဒကိန်းဂဏန်းများအားဖြင့်လူနေထူထပ်.
ကျန်တဲ့မြို့ရဲ့ကျန်တဲ့နေ့ဝက်ခရီးစဉ်အတွက်လုံလောက်ပါတယ် (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို). သငျသညျလူအစုအဝေးကိုခံစားလိုလျှင်, လ၏ပထမတနင်္ဂနွေပေါ်လာ, တမြို့လုံးကုန်စင်တာတစ်ခုအလွန်ကြီးမားသောရှေးဟောင်းစျေးကွက်ဖြစ်လာသည့်အခါ.
Florence Arezzo မှရထား
Arezzo ရထားမှ Perugia
Bologna Arezzo မှရထား
Arezzo ရထားမှ Siena
ဘယ်လိုကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ဗင်းနစ်ချွတ်ထားခဲ့နိုင်သည် 10 နေ့ Florence အားဖြင့်ရထားစာရင်း မှစ. Trips? ဗင်းနစ်အများဆုံးရင်ခုန်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် လူကြိုက်များနေရာများ အီတလီမှာ. တူးမြောင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ featuring, ဘုံဗိမာန်, နှင့် Gothic- စတိုင်အဆောက်အ ဦး များ. ဗင်းနစ် သငျသညျအစဉျအမွဲမြင်ရပါလိမ့်မည်အလှဆုံးမြို့ကြီးများ၏သေချာတဦးတည်းအဘို့ဖြစ်၏. ကစျေးအကြီးဆုံးတဦးဖွစျနိုငျပါတယျသော်လည်း. သင်တစ်ဦးအပေါ်မဟုတ်မှန်လျှင်တစ်ဦးကတစ်ရက်ခရီးစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတွေထဲကနိုင်ပါတယ် တင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်.
သင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းပယ်ရာအခြို့ကို tick ဖို့အဆင်သင့်? ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ပါတယ် 10 နေ့ Florence အားဖြင့်ရထားစာရင်း မှစ. Trips သင်ကဆင်းကျဉ်းမြောင်းကူညီပေးခဲ့တယ်. ဆိုတာသတိရပါ တစ်ဦးကရထား Save အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူကမ်းလှမ်းမှုရထားလက်မှတ်တွေ, သငျတို့သမိနစ်အတွင်းစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-from-florence/?lang=my ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, သင် / pl မှ / fr ပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများ.
Daytrips europetravel ဖလောရင့်စ် Tranride travelflorence travelitaly ဟိုတယ်
တစ်ဦးကဘတ်ဂျက်တွင်ဥရောပခန့်နယ်လှည့်သည် Interrailing သိကောင်းစရာများ